အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ် အတွဲ(၁) အမှတ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၁) ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဲဒီ့ စာစဉ်ထဲမှာပါတဲ့ ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (Rules of Engagement) ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 7K Share – 590
2021-06-27 at 10:08 PM
PDF ….. ( အပေါ် ပို့စ်က အဆက်)
အဲဒီတော့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်နှစ်ခုဟာ ရည်မှန်းချက်တူတဲ့ ဝိရောဓိ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါ ပြဿနာပဲ။ Loacal. PDF တွေ သုံးတဲ့ နည်းနဲ့ ဆင်တူတာက AA။ AA က အုပ်ကြီးရှင်း၊ ဒလန်ရှင်းပြီး မအလ ရပ်ကျေးယန္တရားကို ဖျက်ပြီး AA ရဲ့ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကို အစားထိုးတာ အောင်မြင်တယ်။ အစိုးရတရပ်၊ အစိုးရတွေရဲ့ စံချိန်နဲ့ တိုင်းတာတော့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်လို့ သမုတ်ခံရတယ်။ AA က ရခိုင်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မော်ကွန်းဝင်တံဆိပ်တွေ ရကြမှာပေါ့လေ။
NUG က လွတ်မြောက်နယ်မြေ Gov. PDF တွေကလည်း အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။ Local. PDF ကိုလည်း စစ်သင်တန်းပေးပြီး Gov. PDF တပ်သားတွေ အသွင်ပြောင်းဖို့က ဘယ်လောက်ကြာဦးမယ် မသိဘူး။ Local. PDF တွေကိုလည်း အားပေးချင်တယ်။ ဆက်သွယ်ချင်တယ်။ စီမံချင်တယ်။ အရံအင်အားအဖြစ် ရှိစေချင်တယ်။ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာပဲရှိပြီး လက်တွေ့မှာ “မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ခွင့် ဥပဒေ” ကို ပြင်ဆင်ပေးတာကလွဲလို့ တရားဝင် လူသိရှင်ကြား ဘာမှ လုပ်ပေးလို့ မရသေဘူး။
NUG က ဘာမှသာ မဘာ သေးတာ။ မီဒီယာတွေမှာတော့ PDF ရဲ့ ထိုးစစ် သတင်းတွေ ပျံ့နေပြီ။ ကုလသမဂ္ဂက အကြမ်းဖက်မှုကို သက်ဆိုင်ရာတွေက မလုပ်ကြဖို့ ပြောနေပြီ။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးမင်းကြီး ဆိုသူကလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ PDF တွေက ပြည်သူကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြောပြီ။ မနေ့က NUG သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်က မန်းလေးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ PDF တွေ တိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းမေးလို့ ဒေါက်တာဆာဆာက ထိုးစစ်မလုပ်ဘူး လို့ အသည်းအသန်ငြင်းနေရပြီ။ မအလဘက်လည်း စစ်ဖွတ်မီဒီယာကနေ ဝါဒဖြန့်နေပြီ
ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဟာ PDF ကို နှစ်သက်စွာ သုံးရင်း ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်မယ့် အရိပ်လဏ္ခာတွေ တွေ့နေရပြီ။ ဘာလုပ်ကြမလဲ
အကြံလေး လက်တဆစ်လောက် ပေးနိုင်တာက NUG အစိုးရအနေနဲ့ ၊ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့၊ Local. PDF ကို ဒေသန္တရ အရပ်ဘက် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့လို့ ခွဲခြား ခေါ်ဝေါ် ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ Local.PDF တွေကလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် People Defence ကို Town Defence, City Defence, Civil Defence, ပြည်သူ့ရဲဘော် ၊ ပြည်သူ့ပျောက်ကြား ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ ပြောင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး, နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကလည်း နိုင်ငံတကာကို အမြဲမပြတ် ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုတယ်။
အခြား အကြံဉာဏ်များရှိလည်း NUG ကို တိုက်ရိုက် အကြံပေးကြပါ
ပြည်သူ့ ပျောက်ကြား = People’s Guerrilla
ပြည်သူ့ရဲဘော် = People’s Comrades
မြို့ရွာကာကွယ်ရေး = Civil Defence
( ဒေသန္တရ အရပ်ဘက် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ သိအောင် ကူးယူဖြန့်ဝေပေးပါ)
2021-06-27 at 10:11 PM
2021-06-27 at 10:32 PM
Myat Oo Thar says:
2021-06-27 at 10:56 PM
2021-06-27 at 11:57 PM
2021-06-28 at 2:40 AM
We must win spring revolution 👌👍👏👏👏
2021-06-28 at 9:14 AM
အိန္ ဂ်ယ္ says:
2021-06-28 at 2:13 PM
2021-06-29 at 10:08 AM
ပြည်သူများက သေ အိုအိမ်စွန်ခွာ ပျက်စီးခံရ မင်းတို့ nug က စာစဉ်ထုတ် လေလှိုင်းအစည်းအဝေးလုပ် ငါ့တို့ပြည်သူ့တွေဒုက္ခရောက်နေတာကို ထိုင်ကြည့်နေပါ
ထာဝရ လေးစားပါတယ် မြန်မာပြည် သူတို့ရဲ့အားကိုးရာအစိုးရNUG